Systems Network Administrator (Baltimore, Maryland) - Ellicott Dredges
Administrator Network Baltimore, Maryland
Ny Network Administrator dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana fanampiana ara-teknika isan'andro isan'andro amin'ny Staff miaraka amin'ny solosaina samihafa, mpizara ary tamba-jotra isan-karazany. Io olona io dia tompon'andraikitra amin'ny fametrahana sy ny fikojakojana ny fitaovana sy rindrambaiko rehetra, ny fanaraha-maso ny satan'ny tambajotra mba hahazoana antoka fa miasa tsara ny fitaovana rehetra, ny fitantanana ny rafitra e-mail an'ny orinasa ary manome fanampiana mifandraika amin'ny IT amin'ny mpanjifa rehetra.
Ny mpandrindra ny tambajotra dia tsy maintsy manana ny fahaiza-manao ara-teknika, ary ny fahalalana ny fitsipika sy fomba fanao amin'ny Windows (amin'ny tontolo orinasa), fiarovana amin'ny tambajotra, serasera LAN / WAN, ary fitantanana mpizara miasa amin'ny tontolo misy. Tsy maintsy manana fahaiza-mandray anjara mavitrika amin'ny ekipa tetikasa hanampy amin'ny fanatontosana fahombiazana amin'ny fahavitana, ny fandaharam-potoana, ny kalitao ary ny tanjon'ireo tetibola. Tokony ho afaka hifampiresaka tsara amin'ireo mpiasan'ny IT, ary koa ireo mpampiasa farany sy mpamatsy fahatelo. Tsy maintsy manana fahaiza-manao manatanteraka ny famerenan'ny rafitra ara-teknika ary mamaha ireo fitaovana sy fanamafisana marobe amina dian-tongotra maro.
Manompoa ho loham-pifandraisana hifandraisan'ireo tranga ara-teknolojia sy fangatahana, ao anatin'izany fa tsy voafetra ho:
Ny fangatahana jiro fanampiana an'ny mpampiasa End-endriny sy ny fanaraha-maso ny tranga amin'ny rafi-panondro Spiceworks
Hardware sy rindrambaiko fanohanana, fanavaozana ary fanoloana ny laptop, desktop, printer ary mpizara rafitra
Famahana olana ny tambajotra sy / na tranga mifandray amin'ny server.
Famonoana ny fangatahana tambajotra sy mpizara ekena.
Mametraha kaonty mpampiasa, fahazoan-dàlana ary tenimiafina
Mitantana ny e-mail, anti-spam sy ny fiarovana virus
Manomeza fiofanana sy fitarihana ho an'ireo mpampiasa rehetra
Mitantana sy manara-maso ny backups Veeam
Efa za-draharaha amin'ny fitantanana ny kaonty Office365, mailaka, ary ny fanamarinana maro samihafa
Manatanteraka hetsika mitohy sy fitantanana rafitra toy ny fananganana rafitra, fanaraha-maso ny rafitra, fanaraha-maso ny rafitra, ny fanaraha-maso ny filaminana, sns.
Manatontosa asa miasa mifandraika amin'ny hetsika in-drindrin'ny teknolojia, ao anatin'izany fa tsy voafetra ho:
Mitantana sy mitantana lohamilina an-premier, data foibe ary mpizara miorina rahona
Solosaina finday sy solosaina fiasa ho an'ny mpiasa mampiasa rindrambaiko fampidirana sy fomba fiasa tsara indrindra
Mametraka sy manamboatra ireo fitaovana momba ny fifandraisan-davitra tambajotra (ny tamba-jotra, ny lalana, ny fidirana an-tserasera, sns).
Fanavaozana ny fiarovana ny tambajotra - mitazona fahazoan-dàlana fidirana, fampiharana ireo politikany, manalefaka ny marefo sns
Mamolavola sy mampihatra fanitarana sy tetikasa IT ho avy
Manatanteraka adidy mifanaraka amin'ny fomba fiarovana sy kalitao tsara indrindra, fitsipika / fenitra.
Fepetra takina Required
(2) + taona niainany talohan'ny niasan'ny mpitantana tambajotra mitovy.
Mifandraisa mivantana amin'ny traikefa amin'ny famahana olana sy ny fanohanan'ny solosaina, mpizara ary ireo tamba-jotra miasa amin'ny tontolo marobe mifototra amin'ny teknolojia Microsoft.
Ny fahalalana miasa miaraka amin'ny filaminana maoderina, fametahana rafitra ary fandrahonana ny fomba fanao tsara indrindra, fitaovana ary teknolojia izay ampiasaina hiarovana ny tontolo informatika ambaratonga orinasa.
Fahalalana mifandraika amin'ny fikaingan'ny LAN / WAN / Wi-Fi sy ny foto-kevitra hamaha olana.
Ny fahalalana momba ny asa fanohanana iraisan'ny rafitra sy ny fitantanana rafitra dia mifandraika amin'ny fanohanan'ny mailaka ao amin'ny tontolon'ny fandefasana hafatra amin'ny Microsoft Office365 / Outlook.
Ny asa dia mitaky fitakiana ara-batana manokana toy ny manakatra 50 kilao na mihoatra, fiakarana an-tongotra, sns. Fisandratana ny solosaina, mpanonta ary fitaovana hafa mifandraika amin'ny solosaina.
Tsy mahay mandray am-bava ny fahaiza-manao fifandraisana am-bava sy an-tsoratra
Mahavita laharam-pahamehana, mifanatso amin'ny fe-potoana ary hiasa amin'ny herin'ny fanerena
Mahavita hiasa tsara amin'ny ekipa sy ny olon-drehetra amin'ny ambaratonga rehetra
Faniriana maniry na safidy tianao
Ny mari-pahaizana Bachelor avy amin'ny oniversite nekena na oniversite ao amin'ny Technology Information Technology, Science Science, Management Information Systems, na ny teknolojia mifandraika amin'ny teknolojia hafa mba hampidirina ny asa fampianarana amin'ny fiteny solosaina computer, ary ny rafitra fiasa sy ny teknolojia serasera ho an'ny maro isan-karazany. solosaina.
A + fanamarinana
Net + fanamarinana
Ny fanamarinana Microsoft amin'izao fotoana izao ao amin'ny Desktop, Server, Exchange ary / na Office365
Ny fanamarinana Cisco amin'izao fotoana izao amin'ny CCNA
Araho ny tohin'ny Resume sy Cover